Eriri etere Ozi - China Ebighị Ebi Enyi ptfe Mezie
PTFE ntụ ntụ
PTFE eri akara teepu
Eriri etere Ozi
Eriri etere na-eji mechie, ịtụ, ma gbochie ọdịdọ na threaded bolts, studs, na oyiyi akwa. Ha na--ezo dị ka:
plomba si teepu
Eriri etere na-emekarị ka nke polytetrafluoroethylene (PTFE), a ukwuu crystalline, perfluorinated polima na mma mara site na ya Dupont brand na ụghalaahịa edenyere n'akwụkwọ ikikere-Teflon. PTFE teepu nwere oké ala ọnụọgụ nke esemokwu, ezi chemical-eguzogide, na ezi okpomọkụ na-eguzogide. Chemical inertness egbochi cross-ojiji na-eme ka PTFE eri etere a ezi nhọrọ maka ngwa na-agụnye corrosive ọgwụ ndị dị otú ahụ dị ka mmiri mmiri oxygen, ma ọ bụ caustics dị ka ammonium hydroxide. Eriri etere nwekwara ike mere nke polyethylene (Pee), a ala-na-eri plastic na-eguzogide mmiri na ọtụtụ ọgwụ.
Eriri etere ebu nkọwa ndị dị ka:
PTFE eri teepu suppliers-akọwa na ha na ngwaahịa dị ka ma elu-njupụta ma ọ bụ ala-njupụta. High-njupụta PTFE eri etere ebukari a njupụta nke .70 g / cm3 ma ọ bụ 1.2 g / cm3. Low-njupụta PTFE eri etere ebukari a njupụta nke .37 g / cm3. Ike ọdụdọ bụ ike chọrọ inwere a mpempe eri teepu site Anam Udeme na-abụghị nsọtụ. Elongation bụ fractional abawanye na a na eri teepu si ogologo n'ihi nchegbu na ahụ erughị ala ma ọ bụ ka thermal mgbasa. Mkpa akụkụ maka eri etere gụnyere n'ogologo, obosara, na ọkpụrụkpụ. Banyere mkpụrụ ndakọrịta, ụfọdụ Teflon etere na-e maka ojiji na ọjà, akpa, ma ọ bụ conduits mere nke níle Önwa, black ígwè, ma ọ bụ ọla. Ọzọ PTFE eri akara teepu agbaso chrome, ọla kọpa, iko, plastic, ma ọ bụ roba.
PTFE eri etere eso abụọ bụ isi àgwà ụkpụrụ na na-agba-nzobe maka a dịgasị iche iche nke ngwa. Nnù-T-27730A bụ a US agha nkọwapụta (nnù-SPEC) na ezipụta a kacha nta ọkpụrụkpụ nke 3 mils. AA-58092 bụ a azụmahịa ọkọlọtọ na-ekwusi ike na ọkpụrụkpụ chọrọ nnù-T-27730A, ma na-agbakwụnye, a kacha nta njupụta ọkọlọtọ. White PTFE eri teepu-enye uko akàrà maka a dịgasị iche iche nke threaded nkwonkwo na adabara kasị Plumbing na potable mmiri na usoro. Yellow PTFE eri teepu e mere maka iji na ọjà, conduits, bolts, valves, na threaded gas edoghi na-ebu ikuku, amonia, butane, chlorine, ma ọ bụ hydrogen. Pink Teflon teepu ka nke arọ-oru, na ulo oru ọkwa PTFE na na-eji na azụmahịa ma ọ bụ ulo oru Plumbing ngwa. Green Teflon eri etere nwere ike ga-eji na oxygen-enyefe ngwa.
Post oge: Sep-08-2018
Okwu: 55 Nanshan Road, Langya Town, Wucheng Area, Jinhua, Zhejiang, China (Chile)